Faah faahin kulanka Clasico xiisaha xamaasada leh Real Madrid vs Barcelona ee Copa del Rey – Walaal24 Newss
Faah faahin kulanka Clasico xiisaha xamaasada leh Real Madrid vs Barcelona ee Copa del Rey
February 27, 2019	1	By walaal24
Real Madrid ayaa martigelineysa Barcelona lugta labaad ee semi-finalka Copa del Rey iyadoo barbaro 1-1 ah la gashay Nou Camp seddex isbuuc ka hor.
Real ayaa barbaro culus ka soo gaartay Barcelona lugtii hore iyadoo Lucas Vazquez uu goolka u furay ka hor inta uusan Malcom la imaanin Goolkii bar baraha.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid qaab ciyaareedkooda horyaalka La Liga ayay dhumiyeen ka dib markii guuldarro 2-1 ay ka soo gaartay Girona iyo guushii ay ka gaareen Levante axadii. Waxay raadinayaan inay ku guuleystaan ​​tartankan kaliya mar labaad tan iyo 1993.
Bale ayaa diiday inuu dabaaldego markii uu dhaliyay kulankii ay 2-1 kaga badiyeen Levante.
“Waxaan fahamsanahay in qof kastaa rabo inuu raadiyo diiradda oo aad diirada saarto meesha ay u muuqato muhiim,” ayuu yiri Solari.
“Laakiin diiradda diiradu waxay saarantahay kaliya waxa aan u maleyneyno inay muhim tahay, waa ciyaarta, inay ku guuleystaan Caawa oo ​​Arbacada ah, inay midoobaan, halka kuwa kale ay diirada saaraan.” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Macalinka Kooxda Real Madrid Solari.
Kulanka wuxuu soo galayaa xiliga saacada geeska Afrika 11:00 PM oo Caawa ah.
Dhanka kale, Barca ayaa koobkan qaaday, afartii xilli ciyaareed ee u danbeysay, sababtoo ah waxay ku guuleysteen koobkaan oo ay ku tartamayaan kooxahaha.
Kooxda Ernesto Valverde ayaa tagta Bernabeu iyadoo kalsooni ku qabta inay 4-2 ku garaacday kooxda Sevilla dhamaadka Isbuucaan, laakiin waxay aheyd guushoodii labaad ee lixdii kulan ee ugu dambeysay tartamada oo dhan. Kulankan ayaa noqon doona kulankiisii ​​100aad ee Valverde, iyadoo tababaraha Barca uu guul ku hogaamin doono inuu ku guuleysto koobkiisii ​​afaraad.
Sergio Ramos ayaa la hubaa inuu ku laaban doono line-upka Real Madrid ka dib markii uu seegay kulankii axada ee Levante isagoo ganaax ku maqnaa.
Isco ayaan diyaar u aheyn arin dhab ah, Marcos Llorente ayaa sidoo kale weli dhaawac ku maqan.
Barcelona ayaa ka maqan Arthur Melo, laakiin Samuel Umtiti ayaa ku soo laabtay si uu ugu soo bilowdo kulankiisii ​​ugu horeysay muddo seddex bilood ah kulankii Sevilla.
Dowlada Pakistan oo sheegtay iney soo rideen Diyaarado dagaal laga leeyahay dalka India
War qoraal ka soo baxay Hay’adda lacagta Adduunka ee IMF oo ka hadashay dhaqaalaha Soomaaliya
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dastuurka oo kulan la yeeshay Agasimaha guud ee Madaxtooyada Qaranka
Shacabka Muqdisho oo soo dhaweeyey gaadiidka ay dowladda Soomaaliya u diyaarisay dadweynaha
Madaxweyne Muuse Biixi oo Xilka qaadis iyo Magacaabid ku sameeyey xubno ka mida xukuumadiisa
Wasiir Beyle oo kulan la qaatay Safiirka Turkiga ee u fadhiya Soomaaliya
Dhageyso: Agaasimaha Guud Wasarada Gashaandhiga oo Ka Hadalay Qorshaha Maxkamadda CQS Lagu Geeyay Magaalada Gaalkacyo
Dhageyso: Ra’iisal wasaare Kheyre oo kulan la qaatay Guddiga badbaadinta iyo soo celinta Hantida Qaranka
Daawo: Wafdigii ka socday Aqalka oo la kulmay Madaxweyne Xaaf iyo Madaxa xukumada Sheekh Shakir ee Galmudug
Daawo: Dowlada Qadar oo soo gaarsiisay Dowlada Soomaaliya Gaadiid loogu talagalay Booliiska